मेरो भागमा परेका प्रकाश दाहाल – Janaubhar
प्रकाशित मितिः बुधबार, मंसिर ६, २०७४ | 1160 Views ||
लेखक : उदय जीएम
प्रकाश दाहालले बिना मगरसँग बिहे गरेपछि पार्टीले उनलाई कारवाही ग¥यो र उनी भारतको नयाँ दिल्लीमा बस्न थाले । उनी खाली नै थिए, त्यही भएर होला, सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहन्थे । हामी एकअर्काका स्टाटस र फोटोमा कमेण्ट गर्दै कमेण्ट बक्समै कुराकानी चलाउँथ्यौं । यसमा सक्रिय सहभागिता रहन्थ्यो काठमाडौंका साथी मनोज आठपहरियाको ।
मेरो जेठो छोरा अजय जीएमलाई कलेज भर्ना गर्न गएको बेला राजधानीमा हल्लिने क्रममा वरिष्ठ कवि स्नेह साय्मिले एक्कासी मलाई सिंहदरबार छिराउनु भो ।
शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेललाई भेट्दै गर्दा मैले फेसबुक म्यासेन्जरमा लेखें, “कता ?” प्रकाशले लेखे, “म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा । तपाईं कता ?”
मैले आफू शिक्षा मन्त्रालयमा भएको बताएपछि उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाए । त्यहाँ पुगेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”सँग फोटो खिच्ने अवसर जुर्यो । प्रकाश दाहाल र तत्कालीन प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यजीले खिचेको फोटो म्यासेन्जरमा आएपछि मैले पोष्टिएँ, “जिन्दगीमा पहिलोपटक सिंहदरबार छिरियो । खप्परमा त लेखेरै आएको रहेछु, पहिलोपटक नै प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फोटो खिच्ने सौभाग्य प्राप्त भो ।”
केही दिनपछि यसैलाई थाहाखबर डटकममा भाइ जयसिंह महराले लेख्नु भो, “सिंहदरबार छिर्ने छापामार शैली !”
एक दिन अनलाइनहरुमा समाचार आयो । प्रकाश दाहाल नयाँ दिल्ली बस्दाको समय थियो त्यो । समाचारको आशय थियो, प्रकाश दाहाल बिना मगरसहित विभिन्न देशको शयर गरिरहेका छन् । मोजमस्ती गरिहेका छन् ।
मैले फेसबुकमै सोधें, “खुब देशविदेशमा मस्ती गरिएको छ रे त ।” उनले एकैछिनमा नयाँ दिल्लीबाट फोन गरे र भने, “यी हेर्नुस्, म यहाँ नयाँ दिल्लीमा छु । पत्रकारहरु कस्ता कस्ता र कतिसम्म झुठ समाचार लेख्न सक्छन् ? आफै बुझ्नुस् ।” म आफू पनि पत्रकार भएको नाताले आफै लज्जित महसुस गर्थें र धैर्य गर्नुस्, सबै ठिक हुन्छ भनेर सम्झाउँथें ।
प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुने पक्कापक्की भएको अवस्थामा दाङका तर काठमाडौंमा बस्ने एकजना पत्रकारले लेखेको स्टाटसको स्क्रिनसट पठाएर प्रकाशले भने, “उहाँलाई एक महिना मसँग संगत गर्न लगाइदिनुस् । एक महिनाको संगतमा म उहाँले भनेजस्तै रहेछु भन्ने लाग्यो भने त्यतिबेला जति लेखे पनि लेख्नुहोला । अहिलेचाहिँ फेसबुक र ट्वीटरका ती स्टाटस हटाउन भनिदिनु होला ।”
मैले यी कुरा जस्ताको तस्तै स्टाटसवाला पत्रकारलाई सुनाइदिएपछि ती स्टाटसहरु डिलिट गरिए । लगातार मिडियाको कोपभाजनमा परे तापनि उनी आफू भने मिडियामैत्री नै थिए । भन्थे, “मैले गल्ती गर्छु भने लेख्नैपर्छ, लेखून् तर यहाँ त…. ।”
पछिल्लोपटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र बिना मगरका प्रचार सामग्री डिजाइन गरेर पठाएँ फेसबुकमै । दुईचार दिनसम्म पनि ती सामग्री पोष्ट नभएको देखेर मैले सोधें, “खै त प्रचार सामग्री ?” उनले बिनाको फेसबुक पेजमा पोष्ट भएका ती सामग्रीको स्क्रिनसट पठाए तर केही लेखेनन् । शव्दबिनाका ती कुरा नै हाम्रा अन्तिम कुरा भए ।
अचानक आएको आजको कुदिन । स्तव्ध छु, निःशब्द छु र मर्माहत छु । अझै पत्यार लागेको छैन तिम्रो मृत्युको खबर । अहँ, नर्भिक हस्पिटलदेखि पेरिसडाँडा र आर्यघाटमा पुग्दासम्मका दृश्य र स्वयं प्रचण्डले दागबत्ती दिएपछि धुवाँ बनेर उडेका दृश्य हेरिसक्दा पनि यो मन तिम्रो मृत्यु भएको मान्न तयार छैन । मनले नमाने पनि हावासरी फैलिएको तिम्रो मृत्युको खबर यथार्थमा सत्य बनेर मेरोसामु उभिएको छ । एक्कासी परेको यो बज्रपातलाई सहने शक्ति प्रचण्ड परिवारलाई मिलोस् । मने माने पनि नमाने पनि सत्यलाई स्वीकार गरेर भन्नै परेको छ, हार्दिक श्रद्धाञ्जलि, अलबिदा ।
Prevमहरा र दाङको राजनीतिमा उनको भूमिका
Nextपुनम भन्छिन्– ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि काम गर्छु’